Voalaza fa ny firehetan'ny milina iray no nahatonga ny afo izay nanapotika tanteraka ireo trano sy fitaovana ary vokatra tao amin'io tokotanibe io. Ary ny tsy fahampian'ny rano nampiasain'ny sampana mpamonjy haintrano izay nihezaka namono ny afo, na dia somary tara aza vao tonga teny an-toerana, no isan'ny antony lehibe nampihombo ny afo.
Marihina fa isan'ny niteraka savorovoro tany an-tsain'ny maro indrindra ny momba ity tokotaniben'ny Filatex izay, izay niaram-boina omaly alina ity.
Mbola betsaka tokoa no mahatadidy fa, taona vitsy lasa izay, ranomaso sy kiakiaka no re nakoako teo amin'io toerana io.
Tranona vahoaka maro tokoa no narodan'ny bilidaozera tamin'izany, teo ambany fitarihana vadintany izay narovana mpitandro ny filaminana maromaro. Nambara tamin'izany fa an'ny Filatex ny tany, ka dia noroahany tsy nisy indrafo ny Gasy madinika mafy ady izay ankabeazan'ireo izay nonina teo efa amam-polo taona maro, ary dia nasaina narodana na narodana mihintsy ny tranony.
Tsy nahy tokoa ve sa nisy antony hafa no nahatonga izao voina lehibe izao? Malaza ho tsy mifaditrovana ihany koa moa ilay orinasa amin'ny fomba fitantanana mpiasa ka dia tsy hay intsony fa dia io fahapotehana mahatsiravina io aloha no ita eo amin'io toeram-piasana io ankehitriny.